Macluumaadka Gaarsiinta • Ecorelos
€311.56 €124.62 fursadaha Select
€84.84 €67.87 fursadaha Select
€117.09 €64.39 fursadaha Select
€58.47 – €71.76 fursadaha Select
€83.54 €49.28 fursadaha Select
€94.18 €51.78 fursadaha Select
Bogga ugu weyn / Macluumaadka Bixinta
Bixinta lacag la'aanta ah
Taariikhaha gaarsiinta la gaarsiiyay ee adeeggayaga bilaashka ah ayaa lagu soo bandhigaa dhammaan bogagga wax soo saarka iyo sidoo kale bogga jeegga. Taariikhaha soo gudbinta la saadaaliyay ayaa waliba lagu darayaa emaysiiska ogeysiinta dirida iyo waliba iskuxirka si aad ula socoto gudbintaada khadka tooska ah. Fadlan la soco in taariikhaha la bixiyay ay yihiin taariikho la qiyaasey oo ay ku qaadan karto waqti dheer meelaha qaar isla markaana ay u yaryihiin kuwa kale. Fadlan sidoo kale ogow inay jiri karaan qaar ka mid ah daahida gudbinta inta lagu jiro xilliyada mashquulka ah (fasaxyada iwm) ama haddii ay jiraan duruufo saadaalin kara. Ecorelos dammaanad kama qaaddo in gaarsiinta ay imaan doonto inta u dhaxaysa taariikhaha gaarsiinta la soo saaray, laakiin waxaan ku dadaalnaa sidii aan u bixin lahayn macluumaadka ugu saxda ah ee suurtagalka ah ee ku saleysan macluumaadka aan hayno. Maaddaama alaabadayada si toos ah looga soo diro soo-saareyaasha, waxaad ku heli kartaa dalabkaaga dhoofinta badan (kharash la'aan dheeraad ah) haddii ay ku jiraan badeecado ka socda soo-saareyaasha kala duwan ama noocyada kale.
Hadaad ubaahantahay gaarsiin cad ama taariikhda imaatinka balanta fadlan fadlan nala soo xiriir waana ku faraxsanaan doonaa inaan kuu soo bandhigno sicir. Kaliya nala soo socodsii walxaha aad xiiseyneyso waxaanan kuu sheegi doonnaa xulashooyinka jira.
Adiga ayaa naga daboolay maalin 60 barnaamijka ilaalinta iibsadaha taas oo macnaheedu yahay inaad xaq u leedahay:
Soo celin buuxda Haddii aadan ku helin dalabkaaga 60 maalmood xamuul ah kadib
Beddelka haddii shay u yimaado dhaawac.
Haddii dalabkaagu uusan imaanin taariikhda lagu sheegay emaylka xaqiijinta dhoofintaada fadlan nala soo xiriir annaguna waan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku caawinno. Dhacdada aan la fileynin ee ah in lacag soo celinta ay lama huraan tahay, lacag celinta ayaa laga baaraandegi doonaa iyadoo la adeegsanayo habkaaga lacag bixinta asalka ah (waxaan ku soo celin doonaa macaamilkii asalka ahaa) iyada oo loo marayo Stripe ama PayPal. Fadlan u oggolow 5-10 maalmood si loo soo celiyo soo-noqoshada xisaabtaada mar aan ka hawl-galno.
Fadlan la soco in alwaaxu yahay badeecad dabiici ah sidaa darteedna midabka iyo hadhuudhka ayaa u muuqan kara waxyar oo ka duwan sawirada websaydhka. Tan waxaa la filayaa iyada oo ay ugu wacan tahay nooca agabka sheyga iyo farsamooyinka wax soo saarka. Badeecooyinka badankood ee aan soo bandhigno sidoo kale waa kuwo gacanta lagu dhammeystiraa kuwaas oo iyaguna kuu horseedi kara kala duwanaansho u dhexeysa walxaha.
Meesha alaabta alwaaxda ay ka tiraahdo 'ma ahan kuwo biyuhu xireen' waxay badanaa ka dhigan tahay in sheyku yahay buufi karin laakiin aan ku habboonayn in lagu quusiyo biyaha. Ka fikir inay caadi tahay inaad xidhato intaad gacmahaaga dhaqayso laakiin maaha inaad qubeysato ama aad dabbaal tagto.
Badeecadaheena badankood waxay leeyihiin boos shaqsiyadeyn ah (qeybta gadaal dambe, tusaale ahaan) si kastaba ha ahaatee xilligan xaadirka ah kuma bixinno adeegyo shaqsiyeyn shakhsi ah websaydhkeenna. Waqtigaan la joogo, waxaan kugula talineynaa inaad sheygaaga u qaadato dukaanaka daawashada ee maxalliga ah ama adeegga sawir-qaabeynta u sameynta shakhsi ahaaneed illaa aan adeeggaan ku bixinno websaydhkeenna.